Deg Deg Daawo:DENI Oo Somaliland Wadahadal Ugu Baaqay, – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo:DENI Oo Somaliland Wadahadal Ugu Baaqay,
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Maxamed, oo xalay khudbad ka jeediyay xuska 1-da Luuliyo, ayaa sheegay in uu wada-hadallo la gelayo maamulka Somaliland oo khilaaf xuduudeed kala dhexeeyo Puntland, haddii dhankooda laga helo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Puntland ay wada-hadal diyaar ulaa tahay, cid kasta oo Soomaaliyeed, haddii ay koonfur ahaan lahayd iyo haddii ay waqooyi ahaan lahaydba, si loo dhammeeyo khilaafaadka jira.
“Hadday tahay waqooyi iyo hadday tahay Koonfur iyo Galbeed, cid kasta oo diyaar u ah in lala hadlo diyaar baan u nahay in aan la hadalno” ayuu yiri madaxweynaha Puntland.
Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay dhex-dhexaad ka noqoto doorashooyinka dowlad goboleedyada Galmudug iyo Jubaland, si uusan uga raacin magacii xumaa ee ka raacay doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya.
“waxaan aad u rajaynayaa in ay aad uga fiirsato in magacii xumaa ee meela ka raacay uuna dib dambe u raacin oo ka istaagto dhex dhexaad” ayuu yiri Siciid Deni.
Waxaa kale oo uu Galmudug iyo Jubaland ugu baaqay in ay wax ka bartan doorashadii Puntland oo si xor ah loogu tartamay, isagoo uga digay in xoog wax lagu raadiyo.
Previous Post: DAAWO:-Afhayeenka Isimada Puntland Oo Kashifay Hadal dhexmaray Isaga iyo Raysal Wasaare Khayre
Next Post: Deg Deg:Qorshe La Doonaayo In Lagu Burbursho Hantida Masakiinta laascaanood iyo Horgalka loo soo Wakiishay,